Manana tetik’asa goavana ho anareo aho ry mponin’i Miarinavaratra eto amin’ny distrikan’i Fandriana. Mampalaza ny eto an-toerana ny toaka gasy. Manana tetik’asa famokarana éthanol ny vadiko, ka ny toaka gasy dia afaka avadika ho éthanol hanamorana ny fandrahoana sakafo isan-tokatrano sy ho fiarovana ihany koa ny tontolo iainana. Ho amboariko ihany koa ny lalàna mampitohy an’i Fandriana sy Marolambo. Velirano no ataoko aminareo. Izay lazaiko tsy maintsy ho tanterahiko.
Hitako sy tsapako ny olana sedrainareo mponina eto Mangabe nandritrin’ny fandalovako androany. Mijaly amin’ny tsy fisian’ny rano madio ianareo, mitaraina ihany koa ianareo fa tsy misy herinaratra. Rehefa lany filoham-pirenena aho, ataoko laharam-pahamehana ny hametraka ivon-toerana ahafahana manadio ny rano na ny « centre d’épuration d’eau » eto Mangabe. Fa mialoha an’izay aloha, handefa fitaovana aho hanamboarana paompin-drano ho anareo.
Maro ireo distrika sy kaomina tsy maintsy handalovako amin’ity fampielezan-kevitra fihodinana faharoa ity saingy tsy adinoko raha ny kaomin’i Tsarahonenana. Ataontsika tonga eto ny fampandrosoana izay tsy hitanareo hatramin’izay. Ho jereko manokana ianareo tantsaha. Vao lany filoham-pirenena aho dia hanamboatra ny lalana mampijaly anareo vahoaka, ahafahanareo mampandroso ny asa fivelomanareo.
Fokontany Mahatsinjo kaomina Maevatanana 2
Tsy nataoko ambanin-javatra mihitsy ny nihaona taminareo vahoaka teto amin’ny fokontany Mahatsinjo kaomina Maevatanana faharoa. Izaho no kandida ho filoham-pirenena voalohany nandalo teto. Voaraiko avokoa ireo fitarainanareo rehetra. Tahaka ny tsy fanananareo rano fisotro madio, ny tsy fahampian’ny sekoly sy ny hopitaly, ny tsy fandriampahalemana. Amin’ny foko manontolo no hilazako aminareo fa ho tanterahiko avokoa ny fangatahanareo fa ampio aho mba ahafahako manampy anareo bebe kokoa.
Fantatro loatra ny mangirifiry anareo ry vahoakan’i Tsaratanàna amin’ny tsy fandriampahalemana. Tonga androany hitondra vahaolana : hametraka hery vonjy taitra manokana na Force d’Intervention Spéciale eto aminareo aho mba ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Hiady amin’ny asan-dahalo ihany koa isika. Efa mipetraka ireo paik’ady rehetra. Ny hangatahiko aminareo dia mba mahaiza mifidy amin’ny 19 desambra izao. Hisafidy ny mazava ary hiaraka hanarina an’i Madagasikara isika.
Nafana ny andro teto Andilamena fa nafana ihany koa raha ny fiarahantsika. Ataoko sonia ny fitiavako anareo. Efa nifanaiky isika fa hiaraka hampandroso an’Andilamena.